Suuq-geynta: Isku-waafajinta Kooxahaaga Iibinta & Suuqgeynta B2B | Martech Zone
Macluumaadka iyo tikniyoolajiyadda farahayaga, safarka wax iibsigu aad buu isu beddelay. Iibsadayaashu hadda waxay sameeyaan cilmi baaristooda muddo dheer kahor intaysan waligood lahadlin wakiilka iibka, taas oo macnaheedu yahay suuqgeynta ayaa door weyn ka leh sidii hore. Baro wax badan oo ku saabsan muhiimadda "smarketing" ee ganacsigaaga iyo sababta ay tahay inaad isku waafajiso iibkaaga iyo kooxaha suuqgeynta.
Waa maxay 'Suuq geyn'?
Suuq geynta ayaa mideeya xooggaaga iibka iyo kooxaha suuqgeynta. Waxay diirada saareysaa isku waafajinta yoolalka iyo ergooyinka ku xeeran yoolalka guud ee dakhliga. Markaad isu keento labadan koox ee xirfadlayaasha ah, waad ku guuleysan doontaa:
Qiimaha helitaanka macaamiil ka fiican
Dakhliga oo hagaagay
Maxay Shirkaddaadu Ugu Baahan Tahay Inay Maal Geliso 'Suuq Geynta'?
Qalabayn la'aanta suuqgeyntaada iyo kooxaha iibka ayaa sameyn kara waxyeello ka badan intaad dareemi lahayd. Dhaqan ahaan, kooxahan dadka ah waxaa loo qaybiyay laba silos. In kasta oo shaqooyinkoodu aad u kala duwan yihiin, hadafyadoodu ugu dambeyntii waa isku mid - inay soo jiitaan macaamiil cusub oo ay u soo jiitaan feejignaantooda.
Haddii loo daayo halbeegyadooda, waaxaha suuq-geynta iyo iibintu way is khilaafsan yihiin. In kastoo markaad isu keento, daraasaduhu waxay muujiyeen inaad ogaan karto koror 34% oo dakhli ah iyo 36% koror ku haynta macaamiisha.
Sababta Sababtoo ah mideynta kooxahani waxay shirkaddaada u suurtagelineysaa inay si wanaagsan u fahamto macaamiishaada, taas oo ku wargelinaysa abuuritaanka nuxurka, xayeysiiska iyo gaarsiinta macaamiisha siyaabo kor u qaada wacyiga. Door kastaa wuu buuxiyaa kan kale.
Xirfadleyda suuqgeynta waxay aruuriyaan xogta garashada macaamiisha waxayna horumariyaan waxyaabaha u fududeynaya geeddi socodka jiilka hogaaminta soo gala. Halkaas, kooxda iibka waxay la socotaa tilmaamahan si loo dhameystiro fidinta iyo si toos ah loola macaamilo macaamiisha mustaqbalka. Sidaad arki karto, macno uun bay u leedahay in kooxahani ay isku bog noqdaan.
Focus on Bartamaha Macaamiisha
Markaad haysato qaab ganacsi oo macaamiil udub dhexaad u ah, badanaa waxaad horeyba ugu jirtay wadada istiraatiijiyad guuleysata. Waa inaadan diiradda saarin waxa iibkaaga iyo kooxaha suuqgeynta ay u qaban karaan ganacsigaaga. Saas ma aha, waa inaad isku daydaa inaad ogaatid sida ay u dabooli karaan baahida macaamiishaada. Si loo xoojiyo qadkaaga, isu keen iibintaada iyo kooxaha suuqgeynta si aad uhesho habab aad ku fulin karto codsiyada dhagaystayaashaada isla markaana aad xal ugu hesho qodobbada xanuunka.
Isku waafajinta iibka iyo suuqgeynta hal himilooyin ayaa horseedi kara:
209% dakhli ka badan suuq geynta
67% waxtarka weyn marka ay timaado xiritaanka heshiisyada
Isticmaalka qalabka suuqgeynta
Ma ogtahay in 60% ilaa 70% dhamaan agabyada suuq geynta ee la abuuray aan la isticmaalin? Taasi waa sababta oo ah, haddii aadan shaqaalaynin xeeladaha soojiidashada ah, dadka abuuraya waxyaabaha ku jira waaxdaada suuqgeynta ayaan fahmin waxa ay dadka wax iibiya u baahan yihiin.
Iskaashi lala yeesho Shirkad kaa caawin karta inaad ka shaqaysato Suuq geynta Goobtaada Shaqada
Markaad sahamineyso iibiyeyaasha bixiya awoodda lagu xoojinayo dadaalladaada wax soo saarka oo aad isu keento iibkaaga iyo kooxaha suuq geynaya, raadi shirkad qaab guud u qaadeysa khibradda safarka macaamiisha. Waxaad dooneysaa ganacsi naqshadeeya, geeya oo u maareeya habka iibinta siyaabo macno u sameynaya astaantaada iyo macaamiisha aad isku dayeyso inaad soo jiidato.
Xusuusnow, taabasho kasta oo udhaxeysa ganacsigaaga iyo dhagaystayaashaada waa muhiim. Laga soo bilaabo u-qalmitaanka hoggaanka illaa cusboonaysiinta macaamiisha, had iyo jeer waxaa jira fursad lagu abuuro khibrad aan caadi ahayn oo lagu dhisay kalsooni, daacadnimo iyo natiijooyin.
Waa wax walba oo ku saabsan tababar weyn, qalab heer caalami ah iyo geeddi socod, iyo rabitaan ah inaad beddesho sidaad had iyo jeer wax u qabatay ee horumarinta ganacsigaaga. Kooxdayada ka tirsan ServiceSource waa hogaamiyaasha xallinta dibedda ee shirkadaha, si ay ula xiriiraan khabiir nagula soo xiriir maanta.
Tags: isku xirkainfographicisku waafajinta suuq geyntaisku waafajinta iibkaiibinta iyo suuqgeyntaiswaafajinta iibka iyo suuq geyntaadeegyadasuuq -geyn